Sida loo codsado dhalashada | Macluumaad loogu talagalay muhaajiriinta iyo qaxootiga | Refugee Center Online
Ma rabtaa in aad si aad u barato sida loo codsado dhalashada?
Ka hor inta aadan baran sida loo codsado dhalashada, aad u baahan tahay si aad u ogaato: aad xaq u leedahay in ay noqoto muwaadin Mareykan ah?
Ka hor inta aadan baran sida loo codsado dhalashada, waa in aad hubiso in aad xaq u leedahay. Si aad u dalbato jinsiyadda, waa in aad guud ahaan la kulmaan tayuu shuruudaha soo socda:
Waayo, dadka intooda badan, waa in aad ku noolayd Maraykanka ugu yaraan shan sano oo degan. Si kastaba ha ahaatee, haddii seygaaga ama xaaskaaga waa muwaadin, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad dalbato saddex sano ka dib.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xaq u yeelashada isqaba
Waa in aad haysataa ma falal dembiyeed waaweyn. dembiyada yar yar sida tigidh taraafiig waa okay, laakiin idinku ma waxaa lagu xukumi karaa wixii dambiyo waaweyn. Mar walba daacad noqo oo arrintan ku saabsan sababta oo ah dambiyada yaryar inta badan waa caadi, laakiin haddii aad jiifsato codsigaaga, this ka dhigi kartaa codsigaaga aad diiday. xitaa laga yaabaa in aad is tarxiilay. Haddii lagu xukumo denbi, waxaa aad u muhiim ah in aad la hadasho qareen. Waxay kuu sheegi doonaa wixii aad samayn.
Waa in aad awoodaan inay akhriyaan, ku qor, hadalka iyo dhegaysiga af Ingiriisiga. Waxaa jira qaar ka mid ah marka laga reebo dadka naafada ah ama dadka ka weyn 50 kuwaas oo ku noolaa Maraykanka muddo dheer.
Read ku saabsan ka reeban ee dadka waayeelka ah iyo dadka naafada sano jir ah Lifaaqa D
Dadka u adeegi jireen in ciidamada qalabka sida ee Maraykanka waxaa laga yaabaa xaq u leedahay inaad dalbato jinsiyadda.
Baro badan oo ku saabsan qalmitaanka adeegga
warbixin rasmi ah laga Dowladda Maraykanka ayaa kuu sheegi doona haddii aad xaq u leedahay.
Buuxi warqadda si aad u aragto haddii aad xaq u leedahay inaad dalbato jinsiyadda.
Codsashada dhalashada noqon karaan kuwo lagu wareero. Haddii ay suurtagal tahay, waxaannu ku talinaynaa in aad leedahay caawimaad qareen aad.
1. Tallaabada ugu horreysa waa in ay buuxiso foomka N-400. Waxaad si ay u ka mid ah waraaqaha badan codsiga iyo sidoo kale in aad bixiso kharashka. Halkan waxaa ah link in ay wax aad u baahan tahay in ka mid ah marka aad arjiga N-400. Waxaad si ay u ka mid ah laba photos baasaboor codsigaaga. Xusuusnow in aad qorto "A-lambarka" on dambe ee photos, kuwaas oo. Dadka qaar waxay codsan kartaa dhaafitaanka ujrada ah sidaas darteed uma baahnid in aad bixiso kharashka. Haddii aad buuxinta aad waraaqaha aan qareen, website-ka oo lacag la'aan ah CitizenshipWorks.org caawin doonaa inaad buuxiso codsigaaga. Waxay u eegi doona si loo arko haddii aad qabtid wax dhibaato ah.
2. Waxaad heli doontaa warqad ah la helo in ayaa sheegay in USCIS helay codsigaaga. Ka dhig iyo ku qor lambarka rasiidka 13 lambar ah. Qaado sawir helo on your phone iyo email u naftaada si loo hubiyo in aadan u lumin. Waxaad isticmaali kartaa lambarka rasiidka si aad u hubiso ka status of codsigaaga bogga internetka ee USCIS.
Codsashada dhalashada inta badan kharash $725. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho dhaafitaanka ujrada ah. dhaafitaanka A ka dhigan tahay in aadan bixin doontaa. Waxay ku xidhan tahay inta aad ka dhigi iyo halka aad ku nooshahay.
3. Buuxi aad baaritaanka jismiyeed. Tani waa jeeg ammaanka ah. Waxaa lagu weydiin doonaa in aad tagto xafiis at maalin gaar ah iyo waqti. Hubi inaad ballanta this tago oo timaadid waqtiga! Marka ballantii, ayay qaadi doonaan farahaaga. Taas macnaheedu waxay noqon tuntay doonaa faraha iyo ordi sawirka iyada oo loo marayo nidaam si loo hubiyo in aadan dambi ah.
4. Buuxi wareysi uu siiyay Sarkaalka United States Citizenship and Immigration a. badan oo ku saabsan Baro wareysi Naturalization.
5. Waxaad sidoo kale yeelan doonaan in ay qaataan imtixaanka Civics a on taariikhda Maraykanka iyo dawladda. On imtixaanka this, waa in aad ka jawaabto 6 ka mid ah 10 su'aalaha si sax ah oo ku saabsan Mareykanka Civics, Taariikhda iyo Dowladda. Waxaad qaadan kartaa dhalashada dhaqanka kedis si aad u aragto haddii aad diyaar u tahay imtixaanka yihiin. Haddii aadan diyaar u, aad ku biiri karto our fasalka dhalashada free si aad isu diyaariso imtixaanka.
6. Waxaad heli doontaa go'aan qoraal ah ka USCIS oo ku saabsan codsigaaga. Waxaa laga yaabaa inaad hesho go'aanka maalinta aad wareysiga ama laga yaabo in aad mar dambe loo heli boostada. Go'aanka waxaa la odhan doonaa haddii codsigaaga ahaa:
Haddii aad ku dhex, aad diyaar u ah inay buuxiyaan Munaasabada dhalashada iyo dhaarinayaa Daacad Noqoshada noqon doonaa. Taas macnaheedu waa in aad ballan qaadayaa daacad u ahaanta USA.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan geedi socodka, waxaa jira ururka aad wici kartaa. Ururka deeqaan talobixin Kuwani ku qoran luqado cusub qaar ka mid ah.
Raadi caawimo dhalashada bilaash ah ama qiime jaban kuu dhow